China Marine Fish Oligopeptide ifektri kanye nabaphakeli | I-Huayan
Isisindo Yamamolekhula: 500 ~ 1000Dal, 300-500Dal
Isici: Amaprotheni aphezulu, akukho okufakwayo, okuncane okungamuncwa kalula.
Ukuxazulula kahle inkinga yokunciphisa umswakama wesikhumba nemisipha, engeza ngesikhathi esifanele i-collagen ukugcina isikhumba sincane.
2.Bopha ngokuqinile i-calcium kumaseli wethambo, akukho ukulahleka noma ukonakala.
3.Gcina i-cornea enomswakama futhi esobala, futhi wandise ukubonakala kwamehlo.
4.Promote ukuxhumana okusondele kwamaseli emisipha ukuwenza anwebe futhi acwebezele.
5.Busa i-endocrine, uvikele futhi uthuthukise umsebenzi we-visceral.
Ihlanganiswe ne-immune globulin, yandisa amasosha omzimba.
1.Ingabe inkampani yakho inesitifiketi?
Yebo, ISO, HACCP, HALAL, MUI.
2.Yini ubuncane be-oda lakho elincane?
Imvamisa i-1000kg kepha kuyaxoxiswana.
3.Ukuthumela kanjani izimpahla?
A: Umsebenzi wangaphambili noma i-FOB, uma unomhambisi wakho eChina. B: I-CFR noma i-CIF, njll., Uma udinga ukuthi sikuthumele. C: Izinketho eziningi, ungasikisela.
4.What uhlobo lokukhokha ingabe ukwamukela?
T / T no-L / C.
5.What ukukhiqizwa phambili isikhathi sakho?
Cishe izinsuku eziyi-7 kuye kwezingu-15 ngokuya ngobuningi be-oda nemininingwane yokukhiqiza.
6.Ungakwamukela ukwenza ngokwezifiso?
Yebo, sinikeza i-OEM noma i-ODM service.The iresiphi nengxenye kungenziwa njengezidingo zakho.
7.Ingabe unganikeza amasampuli futhi yisiphi isikhathi sokulethwa kwesampula?
Yebo, imvamisa sizohlinzeka ngamasampuli wamahhala esenziwe ngaphambili, kepha ikhasimende lidinga ukwenza izindleko zezimpahla.
8. Ungumkhiqizi noma ungumhwebi?
Singabakhiqizi eChina futhi ifektri yethu itholakala eHainan.Factory ukuvakashelwa kwamukelekile!
Langaphambilini I-Cod Fish Collagen Peptide
Olandelayo: I-Tilapia Fish Collagen Peptide